27.04.2018 07:04 အပတ်စဉ်သုံးသပ်ချက်: မေ ၁-၄
FBS သုံးသပ်သူများအကူအညီဖြင့် ဈေးကွက်-လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ရပ်များအတွက် အသင့်ပြင်ထားပါ။ အရောင်းအဝယ် အရိပ်အမြွက်နှင့် အကြံဥာဏ်များရရန် ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ပါ!
25.06.2018 12:10 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ငွေကြေးအပေါ် ပြောင်းလဲမှုတွေကို လွတ်သွားသေးသလား?
usd gbp eur nzd jpy cad aud
18.06.2018 09:52 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ငွေကြေးအပေါ် ပြောင်းလဲမှုတွေကို လွတ်သွားသေးသလား? အဓိက ငွေကြေးအတွဲတွေရဲ့ အနာဂတ် ရွေ့လျှားမှုတွေကို သဲလွန်စရချင်ပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တာ Forex သုံးသပ်ချက်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ယခုအပတ်၏ အဓိကဖြစ်ရပ်များကို တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ။
20.05.2018 19:28 ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 20 May 2018
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 20 May 2018 အကျဉ်းချုပ် : အ၀ယ်ဘက်သို့ 39% ၌ ရှိနေပြီး … အရောင်းဘက်သို့ 53% ၌ ရှိနေပါသည်
usd forex ကုနျသှယျ bitcoin7day forecast gold gbp ethereum forex education eur ကုနျသှယျရေး bitcoin အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား forex signals nzd jpy cad chf အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း အပျော် သဘော aud bitcoin ပညာရေး အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း forex exchange litecoin dash လူတွေ့မေးမြန်း လှုံ့ဆော်မှု လူနေမှုဘဝ
20.03.2018 09:24 အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက်
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း အတိုးနှုန်းကိုအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်တိုးမြှင့်မည်ဟု ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြပါသည်.
20.12.2017 07:29 နောက်ဆုံးရ GDP
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံး သုံးလပတ် Q3 GDP ဒေတာကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။.
10.04.2018 08:38 အမေရိကန် CPI m/m
CPIသည် စားသုံးသူများ၏ ငွေဖောင်းပွမှုအခြေအနေကို သိရှိနိုင်သည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
14.05.2018 09:41 အမေရိကန် လက်လီအရောင်းဒေတာ
ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများကြားတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာသည် အတန်အသင့်လှုပ်ရှားမှုကြမ်းလျှက်ရှိသည်။
14.01.2018 19:15 ဘစ်ကွိုင်(BTC/USD): ၀ယ်လိုအား ၁၂၈၅၀ထိရောက်
ဖီဘိုနာချီအဆင့်တွေရဲ့ ၂၃.၆%ဈေးနှုန်း ၁၂၈၅၂နေရာမှာဝယ်သူတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲအနေအထားအရဘစ်ကွိုင်ဟာ ၁၃၀၀၀...
16.07.2018 07:38 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ဒီတစ်ပတ် အရေးအကြီးဆုံး စီးပွားရေး ဖြစ်ရပ်များအပေါ် သဲလွန်စရလိုပါသလား?